About Us - Shenzhen Joint Teknolojia Co., Ltd
Shenzhen Joint Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2006, voasoratra anarana amantarana 'jointech', ary formallylisted amin'ny solaitrabe vaovao telo tamin'ny Febroary 2016, miaraka amin'ny tahiry code: 835897.
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny tambajotra manome fizarana amin'ny finday pananana monitoringand fitantanana vahaolana, ka nanao ho lasa ny orinasa fitantanana ny pananana leadingmobile vahaolana mpanome tolotra sy ny mpandraharaha. Taorian'ny taona maro ofdevelopment sy ny fanangonan-karena, ny orinasa efa lasa tanteraka napetraka ofintelligent fitaovana sy ny finday pananana fitantanana rindrambaiko rahona managementplatform, manome ny tsena amin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana vokatra sy ny tolotra, izay nandroso, azo ampiharina, ary regardenergy fanjifàna sy pananana fiarovana fitantanana toy ny fototra sarobidy.
Thecompany manarona ny tena raharaham-barotra lehibe telo lavitra fitantanana fizarana pananana, ao anatin'izany ny: 1.-tserasera fiara sy ny fanjifàna solika fanaraha-maso sy ny fitantanana ny asa, ny fiara orinasa mpandraharaha izay mahakasika fandaniana solika sy ny vehicleposition; 2.the rehetra fitoeran-javatra sy ny dingana fanaraha-maso sy ny fitantanana entana, fa izay manana be mpanjifa momba ny fiarovana sy ny fitaterana entana; 3.remotemonitoring sy ny asan'ny tambajotra asa, ny angovo sy ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fihazonana powerequipment orinasa.
Mitarika ny injeniera maherin'ny 30 taona traikefa amin'ny fanaraha-maso ny fiara an-tsaha, ny R & D ekipa maharaka ny teknolojia mandroso indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary lasa manam-paharoa maro vokatra sy ny rindrambaiko amin'ny Patents. Ny R & D ekipan'ny no miasa akaiky amin'ny mpiara-miasa ao amin'ireo 55 firenena sy ny faritra, koa dia niara-niasa tamin'ny nahazo diplaoma ireo toeram-pampianarana avy any Shenzhen University, etc.Our R & D ekipa no mandrafitra ny mihoatra ny 30 injeniera amin'ny Senior sy Midlevel ara-teknika fahaizana, ka mizara ho: Hardware Group, Software Group, Testing Group, Project Group, ary drafitra tetikasa vondrona; JOINTECH foana mametraka 8% ~ 15% ny varotra boky ho R & D isan-taona.
JOINTECH dia nandroso Manaova tsipika withyearly fahafahana mivory solika 100.000 ambaratonga Sela Mpandray Hafanana, mandeha ho azy ny fitiliana voalohany milina ao Shina ho an'ny fametrahana mazava tsara avo lenta solika sensor amin'ny fitiliana afaka 500pcs isan'andro.